प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख १२, २०७५ | 175 Views ||
आफ्नो निश्चित उमेर बाँचुन्जेल हामी निरोगी रहन चाहन्छौं र दीर्घायु चाहन्छौं । सधै जवान र तन्दुरुस्त रहन रुचाउँछौं । तर, कसरी यस्तो जीवन पाउने ? यो हाम्रो आफ्नै हातमा छ । हामी निरोगी बाँच्ने वा स्वस्थ जीवन ? यसमा हामी स्वंय जिम्मेवार छौं । जवान रहन, तन्दुरुस्त रहन, निरोगी रहन औषधी सेवन गर्नुपर्दैन् । शल्यक्रिया गर्नुपर्दैन् । यसका लागि केवल अनुशासित जीवनशैली अपनाए पुग्छ । तर, हामी खानपान, दिनचर्यामा वेप्रवाह छौं ।
हामीलाई क्षणिक प्रलोभनले गाँजेको छ । हामी खानपानमा लापरवाही छौं । जिब्रोको स्वाद खोज्छौं । शरीरलाई ऐस,आराम खोज्छौं । मासु, मदिराको साथ छाड्दैनौं । हाम्रो सोच,चिन्तन पनि उन्नत खालको हुँदैन् । परिणामतः हामी रोगी, जीर्ण बन्दै जान्छौं । हामी उमेर नपुग्दै रोगको चंगुलमा फस्न पुग्छौं । अतः यस्ता संभावित दुरावस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि जीवनलाई संयमित र अनुशासित ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ ।
७,आफ्नो विश्राम गर्ने तथा सुत्ने कोठालाई सफा सुग्घर, हावादार तथा खुल्ला राखौं । तन्ना,तकियाको खोल र पर्दालाई नियमित रुपमा फेर्ने गरौं ।
९, दैनिक कुनै एक व्यायाम गरौं । यसका लागि कमसेकम आधा घन्टा समय दिनुपर्छ र व्यायामको तरिका बदल्नुपर्छ ।
Prevसामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न नेताले आफ्नै सन्तानलाई भर्ना गरे